Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmaya dhigiisa Talyaniga. – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmaya dhigiisa Talyaniga.
Star FM November 21, 2018
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ku sugan magaaladda Roma ee dalka talyaaniga ayaa halkaasi wuxuu kulan kulmay Ra’iisal Wasaaraha dalkaasi Talyaaniga waxana uu tilmaamay in dib u xoojinta xiriirkii labada dal uu yahay qorshe mudnaan gaar ah u leh Dowladda Soomaaliya ayna kala hadlayso madaxda Talyaniga.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Raiisul Wasaaraha dalka Talyaaniga kala hadlay kaalinta uu dalkaasi kasoo qaatay dhismaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada maamulka iyo ciidanka, isagoona tilmaamay in kaalintaas oo kale ay haatan ka filanayaan madaxda wadanka Talyaaniga.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa ku boorriyay Dowladda Talyaaniga inay ku dhiirrigeliso ganacsatada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalkaasi inay maalgashadaan Soomaaliya iyagoo ka faa’iideysanaya fursadaha dhanka dhaqaalaha ah ee hada ka jira wadanka Soomaaliya.
Dhanka kale Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa lagu waddaa inuu arbacada maanta ah uu kulan la yeesho dhigiisa wadankaasi Talyaaniga, waxaana lagu waddaa inuu kala hadlo taageeradda Talyaaniga ee Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale lagu waddaa inta uu ku sugan yahay wadanka Talyaaniga inuu booqdo Goobo taariikhi ah oo ku yaalla Magaalada Roma ee caasimada dalka Talyaaniga.
← Duqaymo mar kale xalay ka dhacay gobolka Mudug ee dalka Soomaaliya.
Baarlamaanka oo amray in la baaro eedeymo ku aaddan in mudanayaasha qaar la laaluushay →